I-Chihuahua Terrier Mix - Kunjani Ukuba Nomnikazi - Izinhlobo
Njengoba igama liphakamisa, ukuhlanganiswa kweChihuahua Terrier yilokho nje.
Le pooch enesibindi, ekhanyayo nenamandla ingumphumela we- ukukhwelana ngeChihuahua nganoma yiluphi uhlobo lohlobo lwe-Terrier. Izibonelo ezivame kakhulu zifaka:
Igundane Terrier Chihuahua Mix
Umxube kaJack Russell Terrier Chihuahua
I-Fox Terrier Chihuahua Mix
Umxube we-Yorkshire Terrier Chihuahua
Umxhwele ukwazi ukuthi kwenzekani lapho sixuba ubukhosi kodwa sithande iChihuahua nezinhlobo ezingakhathali nezihlakaniphile zomhlaba? Funda ukuze ubone ukuthi le nja encane, kepha, inja ye-sassy ingaba eyakho.
Ithebula Lolwazi le-Chihuahua Terrier Mix
Usayizi 10 kuye ku-28 ″
Isisindo 6 kuya ku-25 lbs
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-12 - 20
Ifanele i- Amakhaya abantu abadala kuphela
Ukuhluka Kwemibala Umbala omhlophe, omnyama, onsundu, onsundu, o-bi no-tri ngenxa yobubanzi bezinhlobo ze-terrier
Isimo Unamandla, akakhathali, uyasebenza, unenkani, uyabekezela futhi uyakhanya
I-Chihuahua Terrier Mix - Ukubuka konke ngokuzalwa
Ubuntu be-Chihuahua Terrier Mix
Ungayinakekela Kanjani I-Mixed Breed Terrier
Ukondla i-Chihuahua Mix Dog - Izidingo Zokudla
Ukuvivinya Inja Encane
Ukuqeqesha i-Terrier Chihuahua Mix
Ukubukeka kwe-Chihuahua Terrier Mix
Lokho ekushoyo ku-tin, ingxube ye-Chihuahua Terrier ingaba yinja ehluke kakhulu.
Le pooch sassy ingumphumela wokuzalanisa iChihuahua ngenye yezindawo eziningi ezihamba phambili. Njengoba kungenzeka uyazi, kunezinhlobo eziningana ze-terrier ezibhaliswe ne-American Kennel Club. Bayathandwa ngenxa yokuqina kwabo nokuqina kwabo.
Ama-Terriers ajwayelekile asetshenziselwa ukudala lolu hlobo yilawa:
UJack Russell Terrier
I-Yorkshire Terrier ( owaziwa nangokuthi yiChorkie )
Ama-Rat Terriers ahlonishwa ngobuhlakani bawo - hhayi uhlobo oludala, aqala ukubonakala eMelika ngawo-1920's-1930s. Ngosayizi omkhulu kunamanye ama-Terriers, lapho i-Chihuahua iwela nale Terrier, imvamisa iba ngosayizi omkhulu wesilinganiso (isb.amakhilogremu angama-20).
I- UJack Russell Terrier ukhonzwa ngenxa yokuqina kwayo. Azesabi, ziyasubatha futhi zikhula kahle emakhaya asebenzayo futhi zikhetha kakhulu ukushesha noma imidlalo ye-flyball.
I-Fox Terriers ingaba bushelelezi, noma ifakwe ucingo; ngobunjalo obufanayo, ukubukeka kwabo kuphela okuhlukile. Kuchazwe njengokuzimela, le kuyindlela enhle yokusho ukuthi kwesinye isikhathi bazokudumaza. Banamandla amakhulu, laba bantu badinga ikhaya elisebenzayo futhi.
Siyazi ukuthi ama-Terriers amaningi anezici ezifanayo; iyasebenza, iqaphile, ihlakaniphile futhi izimele. Kwenzekani-ke lapho sixuba enye yalezi Terriers neChihuahua?
I-Chihuahua iyathandeka futhi inomusa; abadabuka eMexico, sebephenduke inja yesikhwama esithandwayo kwabacebile futhi badume ngakho ukusetshenziswa kwabo ezinhlotsheni ezixutshiwe . Ziyathandwa ngobuncane bazo; efanele amakhaya amancane nokuhlala kwedolobha. UChis uqaphile, unempilo futhi unenkani, kwesinye isikhathi unenkani futhi uzimele njengamanye ama-Terriers nawo.
Esigcina ngakho ngaleso sikhathi kuyinkathazo ephindwe kabili - ubuhlakani namandla avela ku-terrier nobukhosi obunamandla obuvela e-Chi.
Njengoba lokhu kuhlanganiswa kuyinja eyi-hybrid, akukaziwa yi-American Kennel Club, nokho eminye imixube, njengeChihuahua cross Yorkshire Terrier yaziwa yi-International Designer Canine Registry.
Kwi-Chihuahua Terrier Mix Puppy, amanani entengo aphakathi kuka- $ 400 - $ 800 USD.
Ithegi lentengo ephakeme lingahle lihlotshaniswe nomama oyiChihuahua ngangokunokwenzeka bahlupheke kakhulu ngezinkinga zempilo ngesikhathi sokubeletha . Ama-litter ngokuvamile amancane ngakho-ke abaningi uthola ukuthi abalimi abahloniphekile basebenza ngohlu lokulinda.
Ngaphandle kobubanzi be-terriers evame ukuxubana ukukhiqiza lesi siphaphaphaphu kanye ne-pooch ehlakaniphile, isimo sabo sivame ukufana. Njengoba sazi, asisoze saba yi-100% emphumeleni we-hybrid - angaba yiChihuahua amaningi kuneTerrier noma okuphambene nalokho.
Ngokuvamile, lokhu kuhlanganiswa kuyinja enamandla kanye nenja yezemidlalo. Bavame ukuhlakanipha futhi baqaphele, kepha uma begcine inkani evela kuChihuahua, kungaba yinselele ukuqeqesha - ukwephula umthetho ikakhulukazi kanjalo.
I-Chihuahua Terrier Mix ifanele amakhaya asebenzayo, abantu abadala kuphela. Ngenxa yobukhulu babo obuncane, ababekezeleli ukudlala okunolaka okuvela ezinganeni ezincane, nangezinhlobo zokuzingela zeTerrier, bangancipha .
Bafanele abanikazi abanesikhathi nokubekezela ukubhekana kusenesikhathi futhi baqhubeke nokuxhumana nabantu nokuqeqeshwa ukuqinisekisa ukuthi abakhuli ' inja syndrome ”!
Kaningi kunalokho, i-dog syndrome engacaciswanga ngokukhethekile ngokuzalwa, kungabanikazi abathile abacabanga ukuthi abadingi ukuqeqesha inja encane njengoba bebeyokwenza njengenja enkulu.
Uma inja encane ikhonkotha okuthile bese isaba; ungakhetha ukukhetha inja ukuze uyisuse esimweni. Ubungeke ukwenze lokhu ngenja enkulu, kuzodingeka uphazamise futhi ukhuthaze indlela ehlukile yokuziphatha noma ubhangqe ngomvuzo.
Inja encane ifunda ukugxumela umniniyo ukuze ayibambe ngempendulo yokwesaba, kanti inja enkulu ifunda ukuhlehla okuyindlela engcono yokubhekana nesimo.
I-Terrier Chihuahua Mix, lapho ihlangana kahle ingakwazi ukubekezelela ezinye izinja, kepha, ayijabuleki kuneningi - ijwayele ukukhetha inkampani yabantu.
AmaChihuahuas avame ukuchazwa njengezinja zemindeni - lapho angaba khona amathuba okubekezelela enye inja yohlobo olufanayo noma usayizi ofanayo.
Ngenxa yezizinda zokuzingela kweTerrier, ukuzibandakanya ngokucophelela kuyadingeka uma ulindele ukuthi bazohlala nezinye izinja noma izilwane ezifuywayo zomndeni.
Ake sibone ukuthi usuku luni empilweni yokunakekela le nja lubukeka kanjani.
Njengoba sishilo, le nja ifaneleke kakhulu emakhaya asebenzayo, abantu abadala kuphela. Badinga abanikazi beziguli abaziqondayo izidingo zabo.
Njengoba zincane ngosayizi, ukudla kwazo nsuku zonke kwekhalori nakho kuphansi kakhulu. Lokhu kwenza ukondla lokhu kuhlanganiswa kulula kakhulu .
Ngokwesilinganiso bazodla cishe ama-calories angama-40 ngesisindo somzimba ngosuku. Umzabalazo kaChihuahua ikakhulukazi ngamakhaza, ngakho-ke uma inja yakho igcine umzali wabo omkhulu waseChihuahua ungaqaphela ukuthi basebenzisa ama-calories amaningi esimweni sezulu esibandayo, bezama ukufudumala.
Umxube ojwayelekile wosayizi uzoba cishe ngamakhilogremu ayi-15 esisindo somzimba esizobeka ukudla kwabo kwansuku zonke kumakholori angama-600.
Ukudla kwekhwalithi enhle kufanele kuhlangabezane nezidingo zabo zansuku zonke zokudla okunempilo kubandakanya amaprotheni anele namafutha.
Amaprotheni abalulekile ekukhuleni komdlwane wakho, funa okuphakelayo okungafuneki, noma okuphakelayo okuluhlaza , ngephesenti eliphezulu lefomula. ITerrier yakho engakhathali ngokuqinisekile izokusebenzisa lokho.
Izinhlobo ezincane zivame ukukhuluphala kalula - njengoba zondliwa izigaxa zethebula. Gada izinja zakho zidla nsuku zonke uma ngabe ukhathazekile ngesisindo sakhe.
Ukuba nzima kakhulu ukuqeqesha (ngenxa yenkani yabo yeChihuahua), ungahle ulingeke ukuthi usebenzise ukuphatha okuningi ukukhuthaza isimilo osifunayo - cabanga ukusebenzisa ukuphatha ikhalori eliphansi esikhundleni salokho.
Kufanele ukwazi ukubona ukhalo lwakhe futhi izimbambo zakhe kufanele zithambeke. Ukusuka ekubukeni kwamehlo kwezinyoni kufanele abe nesibalo seglasi sehora emzimbeni wakhe.
Ukudla akuthinti kuphela isisindo, kanjalo nomsebenzi wenja yakho.
Amaminithi Ngaphezulu kwama-60
Ukugcina izakhi zofuzo ze-Terrier, ukuxubana kweChihuahua Terrier kuvame ukuba namandla futhi kube ukukhathala.
Le nja izodinga ukuzivocavoca imizuzu engama-60 ngosuku.
Uma ubucabanga ukuthi le pooch encane ingaba yizambane lombhede, ubungeke uqhubeke eqinisweni. Uma ufuna amazambane osofa azame umzala wakhe .
Bayakuthanda ukuba matasa futhi, yize bancane kangako, bangakwazi ukubekezelela ukuhamba okude kalula futhi ngokuphepha. Kungcono ukuwahamba nge-leash noma kunjalo - iTerrier ekuwo inganquma ukusetha ukujaha.
Ngaphandle kobuhlakani babo, lokho kuxosha kujabulisa kakhulu kunawe (imvamisa)!
Isimo sabo sezinja esingahlangani kakhulu kuneningi kungasho ukuthi amapaki ezinja kunzima ukuwahamba, angahle akhonkothe ​​abheke ezinye izinja, noma aze anciphise. Indlela enhle yokubhekana nalokhu ukuthi ukuzihlanganisa kusukela zisencane futhi ubasize benze ubudlelwane ezinye izinja ezingaba mnandi ukuba nabo.
Akukhona nje ukuthi umzimba wabo uthanda ukusebenza, kanjalo nengqondo yabo.
Njengoba sishilo, le nja encane ihlakaniphe kakhulu.
Inkinga ukuthi ngabe bagcine umugqa onenkani kumzali wabo waseChihuahua - lokhu kungenza ukuqeqeshwa kube nzima kakhulu.
Zonke izinja zisabela kahle ekuqiniseni okuhle futhi ukuqeqeshwa okususelwa kumvuzo .
Qala ukuhlangana nabantu abasha, ubazise kubantu, izilwane, imishini, imishini - konke abazojwayela ukukuthola ngosuku olujwayelekile. Khumbula sishilo ukuthi abanye bavame ukuthuthukisa kanjani 'i-dog dog syndrome', baqeqeshe i-pooch yakho encane njengoba ungenza i-pooch enkulu. Noma yikuphi ukuziphatha ongeke ukulindele enjeni enkulu; ukugxuma phezulu, amaphaphu, ukukhonkotha ngokweqile noma ukusika; ungavumi kusuka enjeni yakho encane.
Ukwephulwa kwendlu kungaba yinkinga ku-Chihuahua ngakho-ke lokhu kungaba yinkinga engaba khona nakuMix yakho futhi, nazi izeluleko zethu eziphezulu zokuqeqesha:
Gcina umdlwane wakho esimisweni sokudla esijwayelekile futhi umyeke ahambe aye “ebhodweni” njalo emva kwesidlo
Mkhiphe into yokuqala ekuseni nokugcina ngaphambi kokulala
Ngena enkambisweni yokumvumela aphume njalo (lokhu kungaba yimizuzu engama-30 noma izikhawu zehora elilodwa njengoba ekhula)
Ukudumisa / ukuvuza lapho umdlwane usuhambe “njengamanzi” hhayi ngesikhathi, injabulo engazelelwe ngesikhathi izomphazamisa futhi imyekise ukuhamba phakathi
Thatha injana uye nayo endaweni efanayo. Uzothatha iphunga lakhe
Musa ukujezisa nganoma yiziphi izingozi ekhaya - ufuna ahambe ebhodweni, endaweni efanele. Kungumsebenzi wakho ukumkhombisa ukuthi indawo efanele ikuphi
Ungathathi hlangothi kunoma yiziphi izingozi ezisendlini ngeviniga elimhlophe ukuze ususe iphunga
Kunezinkinga ezithile ezivamile zezempilo ezitholakala kule nhlanganisela, kufaka phakathi:
I-Patella ebizayo ivame kakhulu ezinhlotsheni ezincane. Yilapho i-kneecap yabo isuka khona endaweni yayo ejwayelekile.
IHydrocephalus, eyaziwa nangokuthi amanzi ebuchosheni , kuvamile ezinhlotsheni ezincane, zamathoyizi. Lokhu kudala ingcindezi eyandayo ngaphakathi kogebhezi, okudala ukulimala kobuchopho futhi kuvame ukubulala.
Isifo Senhliziyo - lokhu kaningi kungazuzwa njengefa futhi kukhawulele amandla enhliziyo okumpompa igazi emzimbeni. Kunezinhlobo zezimpawu ezibandakanya ukukhathala, ukukhathala, ukukhwehlela noma ukucindezeleka kokuphefumula.
Ngenxa yobubanzi beTerriers etholakala kule nhlanganisela, ukubukeka kwazo kungahluka kakhulu.
Ziyabonakala ngemibala ehlukahlukene kufaka phakathi:
Umbala kaBi noTri
Ngaphezu kokwehluka kombala, zingaba zide noma zifushaniswe, kuye ngabazali babo baseChihuahua naseTerrier. Ezinye ziboshwe bushelelezi, ezinye zifakwe ngocingo (isb. IRat Terrier Chihuahua Mix).
Bheka abazali ukuthola umbono ongcono wokuthi ingxube yakho izobukeka kanjani. Ingabe umzali uyinhloko yenyamazane noma ikhanda le-apula uChihuahua? Yesikhathi eside noma emfushane camera? Ingabe iTerrier iyiFox Terrier? Ngabe bushelelezi camera noma ucingo camera? Umzali waseYorkshire Terrier angahlinzeka ngomxube omnyama weChihuahua Terrier. Umzali kaJack Russell angahlinzeka ngombala omhlophe noshukela.
Izidingo zabo zokuzilungisa zizoya ngohlobo lwejazi labo.
Ngokuvamile, amajazi amaningi kudinga ukuxubha izikhathi ezingama-2-3 ngesonto . Khuluma nomkhongi ofanelekayo ukuze uthole ukuqonda kwengubo yakho yokuxuba nokuthi ungayigcina kanjani.
Ngenxa yobukhulu bawo obuncane, ungakuthola kulula ukuwageza ekhaya ukugcina ijazi lawo linuka kamnandi. Amajazi ama-Wiry angaba namafutha impela futhi avele angcolile.
Kanye nokuxubha njalo, bazodinga izindlebe namehlo abo ahlolwe futhi ukuxubha amazinyo masonto onke.
Umxube omnandi kodwa onobuhle we-Chihuahua Terrier - hhayi inkomishi yetiye yawo wonke umuntu, kodwa kubantu abadala abakhuthele abathanda umlingiswa omncane lokhu kungaba yimbangi.
Ukuzibandakanya kusengaphambili nokuqeqeshwa kubalulekile ekunciphiseni amathuba okuthi athuthukise isifo sezinja ezincane.
Udinga umnikazi oqonda isimilo sakhe futhi onesineke sokuqeqesha ngenkani yakhe.
Ukuqeqeshwa okususelwa kumvuzo kanye nokuqiniswa okuhle kukunikeza ukudubula okuhle kakhulu lapha futhi ngenxa yalokho uzoba nenja engesabi futhi enamandla; uqotho ngenhliziyo yakhe yonke.
Ingabe umalusi waseJalimane uDoberman ukuxubela inja?
USaluki: Inja Yasebukhosini yaseGibhithe
teacup maltese usayizi ogcwele ngokugcwele
zingaki izinhlobo zezinkunzi ezingama-pit bull ezikhona
shih tzu hlanganisa imidlwane yama-maltese
amagama amantombazane omalusi waseJalimane